संकट गहिरिंदै जाँदा ओलीको भरपर्ने थलो, शीतलनिवास ! - kageshworikhabar.com
संकट गहिरिंदै जाँदा ओलीको भरपर्ने थलो, शीतलनिवास !
४ माघ, काठमाडौं । पार्टीभित्र संकट गहिरिंदै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भरपर्ने थलो हो – शीतलनिवास । ओली सरकारले जस्तो सुकै सिफारिश गरेपनि निमेष भरमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लालमोहर लगाइदिने गरेकाले बालुवाटार र शीललनिवासबीचको केमेष्ट्रीलाई लिएर विभिन्नखाले चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा कतिपयकानूनी र संवैधानिक त्रुटी हुँदा समेत शीलतनिवासले मिलाइदिने गरेको छ । त्यसैले ओली जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि हच्किएनन् । किनभने उनलाई दरिलो साथ थियो । अहिले पनि ओली माथिको राजनीतिक संकट सकिएको छैन ।
चौतर्फी आक्रमण जारी छ । सबैभन्दा ठूलो आक्रमण त हिजोसम्म एउटै भातभान्छा भएकाहरुबाटै भइरहेको छ । त्यसैले ओली सुरक्षित जोनमा पुगिसकेका छैनन् । त्यसैले उनी शीलतनिवास धाउने वित्तिकै के पो वितण्डा मच्चिन लाग्यो भन्ने संत्राश राजनीतिक वृत्तमा छाउने गर्छ ।
आज पनि प्रधानमन्त्रीओली सखारै शीलतनिवास पुगेका थिए । उनले राष्ट्रपतिसँग लामै गुफ्तगु गरेका छन् । यद्यपि यो भेट नियमित रहेको ओली निकट स्रोतको दाबी छ । तर जानकारहरु भने ओलीले फेरिपनि कुनै षडयन्त्र रच्नकै लागि शीलत निवास गुहारेको बताउँछन् । खासगरी प्रदेश १ र बाग्मतीप्रदेश सरकार धर्मराएका बेलाउनीकतै संकटकाल पो लगाउने तयारीमा हुन् कीभन्ने संत्राश फैलिएको छ ।
Previous articleराष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत एक कर्मचारीको हत्या
Next articleश्री नव कान्ति भैरब बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको तेह्रौं बार्षिक साधारण सभा भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न